पालिकाबासीलाई ५० प्रतिशत छुटमा एम्बुलेन्स सेवा दिएका छौं - SatyaPatrika
२०७७ पुष १८, शनिबार प्रकाशित
खेमराज ओली, अध्यक्ष, गुराँस गाउँपालिका, दैलेख
दैलेखको पर्यटकीय स्थल गुराँस क्षेत्रका साविक ६ गाविस मिलेर गुराँस गाउँपालिका बनेको छ । कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतदेखि २५ किलोमिटरको दुरीमा यो गाउँपालिका पुगिन्छ । स्थानीय तहको संरचनापछि यस गाउँपालिकामा अन्य विकासका गतिविधिसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार हुँदै आएको छ । हाल यहाँका हरेक नागरिक आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुगेका छन् । हरेक वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भएका छन् । त्यस्तै विशेषज्ञ सेवा सहितका अस्पताल निर्माणको तयारीमा छ । गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत छुटसहित स्थानीयलाई एम्बुलेन्स सेवा दिएको छ । यसैबिच स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध बिषयमा केन्द्रित रहेर गाउँपालिका अध्यक्ष खेमराज ओलीसँग सत्यपत्रिकाकर्मी चन्द्रा कँडेलले गरेको कुराकानी :
गाउँपालिकामा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो छ ?
रु साविकका ६ वटा गाविस मिलेर बनेको यस गुराँस गाउँपालिकामा जम्मा ६ वटा स्वास्थ्य संस्था थिए । तर स्थानीय तहको संरचना निर्माणमा ८ वटा वडा विभाजन भएपछि हामीले नीतिगत निर्णय गर्दै ८ वटा स्वास्थ्य संस्था विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयन ग¥र्यौं । यसका साथै दुर्गम बस्तीमा दुई वटा वर्थिङ सेन्टरको सुरुवात पनि गरेका छौं ।
तिनै वर्थिङ सेन्टरले स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा सेवा दिइरहेका छन् । हाल गुराँस गाउँपालिकामा १० वटा स्वास्थ्य संस्था संचालनमा छन् । सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पुर्वाधारको अवस्था पनि विगतको भन्दा राम्रो छ । वडा नम्बर १, २, ८ र ५ मा स्वास्थ्यको भवन निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ ।
गुराँस गाउँपालिकाको रानिमत्तालाई संघीय सरकारको अनुमतिमा पाँच शैयामा कोभिड अस्पताल बनाएका छौं । चार नम्बर वडामा १५ शैयाको अस्पतालको शिलान्यास भएको छ । जनताको पहँुचमा स्वास्थ्य भन्ने अवधारणालाई लिएर स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढाएका छौं । गुराँस गाउँपालिकाको आर्थिक स्रोत र क्षमतालाई भरपुर रुपमा प्रयोग गरेर स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थित गर्दै गएका छौं ।
अनि स्वास्थ्य जनशक्ति प्रयाप्त छन् त ?
हामी निर्वाचित भएको पहिलो र दोस्रो वर्ष स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनमा निकै चुनौती भयो । संघीय सरकारले ६ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र वैधानिकता दिएको र सुचिकृत गरेकाले स्वाथ्यका जनशक्तिलाई ठिक ढंगले समायोजन गरेको अवस्था थिएन ।
अहिले संघीय सरकारबाट उपलब्ध दरवन्दीको आधारमा आउने स्वास्थ्यकर्मीहरु सबै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकता अनुसार छन् । पालिकाले संचालन गरेका स्वास्थ्य संस्थामा पालिकाको तर्फबाट नै करारमा नियुक्ति गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक पर्ने थप जनशक्ति पनि व्यवस्थापन गर्दै जाने छौं ।
तपाई निर्वाचित हुनु पहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था र पछि भएका मुख्य सुधारहरु के–के हुन् ?
स्थानीय सरकार बन्नु भन्दा पहिला प्रयाप्त जनशक्ति र स्वास्थ्य संस्था थिएनन् । जनताले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाएको अवस्था थिएन । भौगोलिक विकटताको कारण टाढा–टाढाका स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन सकस थियो । अहिले वडागत र पाएक पर्ने क्षेत्रमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेका छौं । यसका साथै उपचारको लागि एम्बुलेन्स चढेर जिल्ला बाहिर जानुपर्दा महंगो शुल्क थियो । अहिले पालिकाको आफ्नै स्रोतबाट दुई वटा एम्बुलेन्स संचालन गरेका छौं ।
गाउँपालिकाका जोकोेही नागरिक थप उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुप¥यो भने सुर्खेतका लागि २५ सय र नेपालगञ्जका लागि ५५ सय भाडामा पालिकाले ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थासहित एम्बुलेन्स सेवा प्रवाह गरेको छ । जनताले भने अनुसार जतिसक्दो छिटो र सस्तो एम्बुलेन्स सेवा दिने प्रयासमा छौं ।
पालिकाभित्र बाल तथा मातृ स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ?
विगतका दिनमा मातृ मृत्यु तथा बाल मृत्युदर राज्यको मापनमा पनि अत्याधिक थियो । हाम्रो गुराँस गाउँपालिका पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । तर पछिल्लो समय जनचेतनामूलक कार्यक्रम, क्षमता विकास कार्यक्रम र पोषण सम्बन्धि सचेतनाका कार्यक्रमले शिशु तथा मातृ मृत्युदर घटेको छ ।
आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार आएको हाम्रो तथ्यांकले पनि देखाउँछ । सुनौला हजार दिन अवधिका आमा र बच्चाको पोषण सुधार कार्यक्रमहरु पनि छन् । बस्ती सरसफाइ कार्यक्रम, घरभेट कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रममार्फत जनतालाई सेवा पु¥याउने काम गरेका छौं । अहिले आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ । पहिलेको जस्तो बाल तथा मातृ मृत्युदर निकै घटेको छ । पालिकाले स्वास्थ्य चेतनाका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएको हुँदा विगतको तुलनामा जनताको स्वास्थ्य चेतना स्तर पनि बढेको छ ।
उसो भए सबै जनताले आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् त ?
स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नका लागि १–२ घन्टा लाग्ने ठाउँ पनि थिए । त्यस्ता टाढाका बस्तीमा हामीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेका छौं । एउटा पालिकामा १० वटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना हुनु र दुई वटा अस्पताल बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्नु सामान्य कुरा होइन । त्यसैले पनि जनताले आवश्यकताको आधारमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् । पालिकाका कुनै पनि नागरिक आधारभुत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचभन्दा टाढा छैनन् ।
तपाईंले आफू निर्वाचित भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहेर पनि गर्न नसकेको र अब गर्नुपर्ने त्यस्तो केहि योजना छन् ?
स्वास्थ्य जनताको पहँुचमा भन्नासाथ स्वास्थ्य सुविधा जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने राज्यको अवधारणा हो । हाम्रो पनि दृष्टिकोण त्यही नै हो । तर, राज्यको मापनमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । त्यो अवस्थामा हामीले आर्थिक स्रोतलाई मध्यनजर गरी अघि बढ्दा चाहे अनुरुपको निःशुल्क र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको महशुस भएको छ ।
विज्ञता हासिल गरेका जनशक्तिको आवश्यकता छ । दरखास्त आह्वान गर्दा समेत विशेषज्ञ डाक्डर आउन सकेको अवस्था छैन । भर्खरैमात्र कार्यपालिकाको बैठकबाट शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका छौं । अबको केही समयमा कोभिड अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक आउनु हुन्छ । त्यसपछि अपेक्षा गरेअनुसारको काम हुन्छ ।
जब पहिलोपटक सिन्दुर लगाएर विवाह समारोहमा पुगिन् रेखा…
बिग व्यास लिगमा सन्दीपको पहिलो विकेट